चिकित्सा शिक्षामा लुट जस्ताकाे तस्तै सराेकारवाला निकाय किन माैन ?::देश र जनताप्रति समर्पित
चिकित्सा शिक्षामा लुट जस्ताकाे तस्तै सराेकारवाला निकाय किन माैन ?
मेडिकल शिक्षामा बिकृति उस्ताकाे उस्तै छ। चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न ६ महिनाअघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजहरुको चर्को शुल्क असुली यथावत् छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको र विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भइरहेको मौका छोपेर कलेजहरुले मनपरी शुल्क असुलीरहेका हुन् । निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी लिँदै आएका छन् ।
शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र गण्डकी मेडिकल कजेजका विद्यार्थी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले उपत्याकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेकोछ ।
कलेजहरुले भने एउटै विद्यार्थीसँग दोब्बर शुल्क (८०लाख)सम्म असुल्दै आएका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजले एउटै विद्यार्थीबाट ६० लाख लिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।
अन्तत: झुक्याे सिएमसी प्रशासन यस्ताे भयाे बिधार्थी र कलेजबिच सहमति
कीर्तिपुरको जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिए एमबीबीएस विद्यार्थी
१ महिना भित्र बढी लिइएकाे पैसा फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई गृह र शिक्षा मन्त्रालयकाे निर्देशन
संसदीय समिति नै मेडिकल माफियाको प्रभावमा, कसरी हटाइयो कारबाहीको अंश ?
आइओएमको आकस्मिक बैठकः एमबिबिएस, नर्सिङ, फार्मेसीसहित सबै विषयको परीक्षा स्थगित हुने
मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजकाे सम्बन्धन खारेज गर्न समितिकाे सुझाव